သက်တမ်း ၁၄ နှစ်ရှိသည့် ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီမှ ရှယ်ယာ အားလုံးကို ရောင်းချလိုက်တဲ့ မင်းသား ဘေယေ?? - Yangon Media Group
ဆိုးလ်၊ မတ် ၁၄
တောင်ကိုရီးယား မင်းသားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဘေယောင်ဂျွန်းသည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော Keyeast ကုမ္ပဏီမှ ရှယ်ယာအားလုံးကို ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်သည့် S.M အင်တာတိန်းမန့်သို့ ရောင်းချလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ S.M. အင်တာတိန်းမန့်က မင်းသားဘေ၏ Keyeast ကုမ္ပဏီမှ ရှယ်ယာ ၂၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ဝမ် ဘီလီယံ ၅ဝ ဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း မတ် ၁၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းသားဘေသည် ယင်းကုမ္ပဏီတွင် အကြီးဆုံး ရှယ်ယာရှင် ဖြစ်သည်။
S.M.အင်တာတိန်းမန့်က ငွေသားဝမ်ဘီလီယံ ၁၅ သန်းကို ပေးချေမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့်ငွေကြေးပမာနှင့်ညီမျှသည့် S.M. ရှယ်ယာဖြင့်လက်ခံမည်ဟုဆိုသည်။ မင်းသားဘေသည် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Auto Wi-ntech ၏ရှယ်ယာ ဝမ်ကိုးဘီလီယံဖိုးဝယ်ယူခဲ့နောက် ယင်းကုမ္ပဏီကို Keyeast ဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ၎င်း၏ဇနီးသည် မင်းသမီးပတ်ဆူဂျင်းသည် ပထမဆုံးသားဦးကိုမွေးဖွားခဲ့သည့် ဒေသဆေးရုံမှ မျက်နှာလိုက်ပြီး ကုသမှုခံယူခဲ့ရ သည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်းထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် အသေးစားရှယ်ယာရှင်များက ရှယ်ယာဈေးနှုန်း ကမောက်ကမ ဖြစ်ခဲ့ရာတွင် တာဝန်ယူရမည့်ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။ Keyeast ကုမ္ပဏီသည် နာမည်ကျော် သရုပ် ဆောင်များဖြစ် သော ဆွန်ယောင်းဂျူနှင့် ဟန်ယယ်ဆူးလ်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေရပြီး ကုမ္ပဏီခွဲ Content u သည်လည်း မင်းသားပတ် ဆောဂျွန်း၊ ဟုန်ဆူ ယောင်းနှင့် ဂိုအာရာတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေရသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အခြားကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သည့် Content K သည်လည်း နာမည်ကျော်ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ် သည့် “Dream High” နှင့် “Ohla-la Couple” တို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူး သည်။
မျိုးဆက်သစ်များ ထွက်ပေါ်စေမည့် ကရာတေးဒို ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပရန် စီစဉ်
သန်လျင်မြို့ မှ လူသတ်မှုဖြင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသူကို မြဝတီမြို့၌ အိမ်ထောင်ကျ နေထိုင်စ??